Deg Deg: Qaraxyo ka dhacay garoonka diyaaradaha Istanbul ee Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDeg Deg: Qaraxyo ka dhacay garoonka diyaaradaha Istanbul ee Turkiga
Deg Deg: Qaraxyo ka dhacay garoonka diyaaradaha Istanbul ee Turkiga
June 28, 2016 Puntland Mirror World 0
Dad badan ayaa ku dhaawacmay labo qarax oo isxiga oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ugu weyn ee magaalada Istanbul (Ataturk) ee dalka Turkiga, sida ay sheegtay wasaarada arrimaha gudaha Turkiga.
Rasaasta qoryaha ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ay ka dhacday garoonka diyaaradaha sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan Istanbul.
Mid kamid ah qaraxa ayaa loo malaynayaa inuu ka dhacay meesha laga soo dago ee garoonka.
Wasaarada arrimaha gudaha ayaa sheegtay in mid kamid ah qaraxyada loo malaynayo inuu ahaa weerar isbiimayn ah.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarka.
Garoonka Ataturk ayaa kamid ah garoomada ugu mashquulka badan aduunka kaasoo u adeegay sanadkii 2015-ka in ka badan 60 milyan oo qof.
Wixii soo kordha dib baan idiin la socodsiin doonaa.
July 16, 2016 Madaxweyne Erdogan oo ku tilmaamay isku dayga afgembiga ‘fal khaa’inul waddanimo’
June 29, 2016 Ugu yaraan 36 qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha Istanbul dalka Turkiga
January 1, 2017 Ugu yaraan 39 qof oo ku dhimatay weerar argagixiso oo ka dhacay baar lagu caweeyo oo kuyaala Istanbul
July 16, 2016 Dad gaaraya 265 qof oo ku dhimatay intii uu socday iskudaygii afgembiga dhicisoobay ee Turkiga
Wasiirka cusub waxbarashada Soomaaliya oo xilka la wareegay
Kooxo burcadbadeed looga shaki qabo oo xeebta degmada Eyl ku afduubtay dooni yar si ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi ee gooshaysa xeebaha Badweynta Hindiya
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxo burcadbadeed looga shaki qabo ayaa dooni ku afduubtay xeebaha degmada Eyl ee gobolka Nugaal, sida uu Puntland Mirror u sheegay sarkaal katirsan ciidamada badda Puntland. Cabdisalaam Maxamuud oo ah sarkaal katirsan ciidamada [...]
Dowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay ciidankii ay tababareen Imaaraatka Carabta, sida uu sheegay sargaal ciidanka katirsan. Abaanduulaha ciidanka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidankii ay [...]